Dalka mareykanka waxa ka dhacay Toogasho arday lagu laayay oo ka dhacday - Radio somit
Dalka mareykanka waxa ka dhacay Toogasho arday lagu laayay oo ka dhacday
Ugu yaraan 18 qof ayaa ku dhintay toogasho ka dhacday dugsi hoose oo ku yaalla magaalada Uvalde, ee gobalka Texas ee dalka Mareykanka ,magaalada dilku ka dhacay waxaa ku nool dad gaaraya 16,000 oo qof , waxayna galbeed ka xigtaa magaalada San Antonio. Dadka dhintay 17 ka mid ah waxay ahaayen arday halka midka kalana uu ahaa macalin.
Eedeysanaha falkaan gaystay waxaa da’diisa lagu sheegay 18 jir, kaas oo ku noolaa agagaarka magaalada Uvalde,magaciisuna waa Salvador Ramos sida la baahiyay. Wararku waxay sheegayaan inuu dhintay ninka toogashada gaystay waxaana loo malaynayaa inay toogteen boolisku.
Ardeyda dhigata Iskuulka wax ka dhaceen waxay ahaayeen fasallada labaad, saddexaad, iyo afraad, taasoo la micno ah inay da’doodu u dhexaysay 7 ilaa 10 jirro.
Wararka ka soo baxaya toogashadaan ka dhacday gobalka Texas ee dalka Mareykanka ayaa sheegaya in labo qof oo dhaawac soo gaaray ay haatan ku suganyihiin xaalad halis ah . Labadaan qof waa gabar 10 jir ah iyo haweeney 66 jir ah.Laba askari oo booliis ah ayaa iyaguna ku dhaawacmay weerarka.
Previous articledagaal dhexmaray Canfarta iyo Soomaalida
Next articleCadaado Ayaa Maanta Salaad roob doon ah laga tukaday…